Iray amin'ireo haitraitra ankafiziko amin'ny fiainana ny fiara tsara tarehy. Tsy mandeha manao vakansy lafo vidy aho, mipetraka eo amin'ny faritry ny vozon'akanjo manga, ary tsy manana fialamboly lafo vidy… ka ny fiarako no masaka ho ahy. Mandeha kilometatra iray kilaometatra isan-taona aho ary mankafy mitondra any amin'izay toeran-kaleha ao anatin'ny roa andro.
Ny fiarako dia manana efijery HD 3 namboarina - efijery iray mikasika ao amin'ny console ary iray ao an-damosin'ny seza aloha rehetra. Tao anatin'izay 3 taona lasa izay, mino aho fa tsy nampiasa afa-tsy iray tamin'ireo efijery tao amin'ny seza aoriana aho… raha nipetraka teo amin'ny seza aoriana ny zanako vavy tamin'ny dia iray. Ny fiara dia manana mpilalao DVD, audio / video hookup eo amin'ny seza aoriana, radio satelita ary OnStar. Misy sehatra sari-tany natsangana tao amin'ny console.
Eo amin'ny seza eo alohako amin'ireo fitsangatsanganana ireo ny iPad sy ny iPhone miaraka amin'ny charger ilaina ary ny fifandraisana USB amin'ny rafitry ny feon'ny fiarako. Ao amin'ny seza any aoriana, ao amiko ny solosaina findainy. Mampifandray ny findaiko amin'ny rafitra ny Bluetooth.
Vantany vao vita ny fitsarana ho an'ny radio satelita, Navelako handeha izy. Ny radio iTunes sy ny mozika amin'ny iPhone dia manome kalitao manankarena amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB amin'ny alàlan'ny rafi-peo manodidina an'i Bose ao anaty fiara.
The sehatra sarintany mila fanavaozana amin'ny alàlan'ny DVD isan-taona izay mitentina $ 100 mahery mba hitazomana ny sarintany hatrany. Tsy mampiasa azy ireo aho satria mampiasa Google Maps sy ny mombamomba ny fifandraisako rehetra, ny fikarohana amin'ny Internet ary ny kalandrie ataoko dia tafiditra tanteraka.
Niaraka ilay fiara nomeraon-telefaonany manokana fa tsy nampihetsika mihitsy aho… izany no antony ahazoako smartphone ary ampiasaiko ny fifandraisana Bluetooth (mandeha tsara izy io).
Ny fiara dia manana kapila mafy 40Gb ao anaty ahafahako mamindra mozika amin'ny alàlan'ny USB, CD, na DVD… fa tsy amin'ny alàlan'ny finday avo lenta. Ka manana CD kisendrasendra vitsivitsy aho izay tsy henoko mihitsy.
My Famandrihana OnStar hifarana tsy ho ela ary eritreretiko fatratra ny tsy hisoratra anarana amin'ny serivisy mitohy. Tsy mampiasa azy fotsiny aho… na inona na inona.
Hatramin'ny nanavao ny iOS dia nandalo olana sy findaiko tsy nahazoako fankasitrahana tamin'ny fiara aho. Ny fiara tsy manana fanavaozana, ny app store, na tsy miray volo amin'ny fiainako… fa ny findaiko kosa.
GM izao dia manampy wifi ao anaty fiarany ho safidy. I efa manana wifi… amin'ny alàlan'ny teboka mafana amin'ny iPhone sy iPad-ko. Ny fanambarana an-tariby amin'ny wifi fiara dia nahatonga ahy ho lasa lavitra. Ivelan'ny filohan'ny GM dia lehilahy Telecom, tsy azoko mihitsy ny antony andehanany amin'ity lalana ity.
Tsy mitondra ny fiarako na aiza na aiza aho, Nentiko n'aiza n'aiza ny findaiko.
Ny varotra iPad sy ny varotra takelaka dia manala ny birao rehetra any. Namaky vaovao vitsivitsy aho fa i Apple dia miasa amin'ny fitondrana interface iOS amin'ny fiara ao anatin'ny taona vitsivitsy. Tsy isalasalana fa afaka tonga teo aloha i Android. Ny tsy azoko dia hoe maninona ny indostrian'ny fiara no manandrana miasa amin'ny lafiny iray raha toa ka efa eo am-pelatanako ny teknolojia rehetra.
Ny findaiko dia tsy fitaovana ho an'ny fiarako.
Mila tabilao ahafahako mamindra ny findaiko ao anaty izay ahafahana manome console izay mampiseho rindranasa mahazatra amin'ny efijery mikasika lehibe kokoa. Tiako ho kilemaina ny kitendry raha tsy mijanona ny fiara. Tsy tokony ho afaka nanala ny telefaona akory aho raha tsy hoe tany amin'ny valan-javaboary. Esory ny backscreens ary apetaho takelaka manerantany ho an'ny takelaka. Avelao ny mpandeha hanefy ny telefaona na ny takelaka misy azy ireo, mihaino ny mozikan'izy ireo manokana, na mifandraisa amin'ny alàlan'ny App amin'ny fiarako hanitarana ny efijery (toa ny AirPlay ho an'ny AppleTV). Avelao aho hitendry ny mozikan'ny mpandeha ahy na ny mozikako.
Fitaovana fanampiny ho an'ny findaiko ny fiarako.
Te-hifehy, hanavao, hividy fampiharana aho, hihaino mozika, hiditra amin'ny sarintany, na hizara ny efijery amin'ny fitaovako… Tsy ny lampihafon'ny fiarako. Tsy te handoa drafitra angon-drakitra vaovao aho, drafitra telefaona vaovao, drafitra mozika vaovao, angona sarintany vaovao… rehefa efa nandoa izany aho tamin'ny finday avo lenta sy ny takelaka.
Ny hany zavatra mety hidirako dia ny OnStar na ny fifandraisana data satelita hafa izay aloako ho backup raha sanatria ka tsy ao anatin'ny sela misy ny mpitatitra aho. Fanampin'izany, ny bateria fitehirizana amin'ny fampidirana ao amin'ny fitaovako raha sendra lozam-pifamoivoizana ny fiara ary tsy misy ny herinaratra dia mety aloa.
Ireo mpanamboatra fiara dia tsy tokony hiasa amin'ny rafitra fandidiana sy ny fifandraisana wifi, tokony handeha izy ireo hitondra ny traikefan'ny fiara amin'ny finday… ary avy eo ny rafitra iray izay mampiditra ny fiara ao anaty findaiko.
Fanamarihana: Avy amin'ny Cadillac ary ny rafitr'izy ireo CUE.
Tags: indostrian'ny fiaraCadillaccadillac querafitra fiasa fiaragm wifiFivarotana finday sy tabletteMobile Appsfinday Bluetoothfindaoro findayrafitra miasa findayWifi
Fomba 6 hananganana indray ny atiny taloha
24 Okt 2014 amin'ny 1:19 PM
Toy ny mahazatra, dia manaiky anao 100% amin'ity lahatsoratra ity aho. Famerenana sy famoahana mamirapiratra tanteraka momba ny zavatra tokony hoeritreretin'ny indostrian'ny fiara.
25 Okt 2014 amin'ny 1:40 PM